vendredi, 04 janvier 2019 22:45
Morondava: Zaza menavava nipitika avy ao anaty fiara, maty tsy tra-drano
Vaky kodiarana ampandehanana tamin'ny lalam-pirenena faha-34, sampanana miazo an'i BeloTsiribihina ny fiara Sprinter iray, manao zotra Antsirabe-Morondava, raha hiazo ny renivohitry ny Faritra Menabe androany tamin'ny 5 ora maraina.
Tafavoaka ny lalana ary lasa tany an-tanimbary ilay Sprinter. Nandritra izany no tafavoaka ny fiara ilay zazavavikely vao enim-bolana, ary maty tsy tra-drano.
Mpandeha miisa enina no naratra ka anisan'izany ny renin'ilay zaza, izay tapaka soroka sy ratra amin'ny tavany sy tanany.
Nandalo fandidiana ilay renin'ilay zazakely. Raha iny hiditra bloc iny ilay ramatoa dia nanafatra fa misy vola ao andamosin'ilay zaza maty, nafenina tao noho ny antony fandriampahalemana.
vendredi, 04 janvier 2019 22:44
Mahajanga: Miaina anaty delestazy ny mponina hatramin'ny alina
Androany maraina vao nisy ny fampilazana avy amin'ny talem-paritry ny orinasa JIRAMA fa lany ny tahirin-tsolika, ka izay no mahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra. Tsy maintsy miadry ny famatsiana avy any Antananarivo, izay vinavinaina ho tonga rahampitso sabotsy vao hiverina amin'ny laoniny ny herinaratra raha ny fanazavana hatrany.
60 000 litatra isaky ny 24 ora, izany hoe isan'andro no gazoala ilaina hamokarana sy hamatsiana herinaratra ho an'i Mahajanga tampon-tanana.
Mihafy sy mandefitra indray aloha izany ny mpanjifa mandrapivahan'ny olana izay mateti-pitranga.
vendredi, 04 janvier 2019 09:17
Ambatondrazaka: Lany solika ny Jirama
Tapaka tamin’ny 4ora maraina teo ny jiro eto an-drenivohitry ny faritra Alaotra Mangoro. Tsy fisian’ny solika no voalaza fa antony. Raha ny fanazavana azo io maraina io dia mbola hifampiraharaha amin’ny orinasa Galana, izay mpamatsy solika ny Jirama Ambatondrazaka, ny tompon'andraikitra hiverenan’ny famokarana herinaratra eto an-toerana.
vendredi, 04 janvier 2019 09:14
Marc Ravalomanana : « Nous ne cherchons que la vérité sur le choix de la population »
« Cette vérité est le seul garant d’une stabilité politique à Madagascar » a dit l’ancien Chef de l’Etat et candidat au second tour de l’élection présidentielle lors de sa rencontre avec la Communauté internationale (GIC-M) le 31 décembre 2018.
A Marc Ravalomanana de continuer qu’il s’engage à éviter une autre crise et violences à Madagascar et de conclure que « Nos actions pour la recherche de la vérité se feront paisiblement et strictement dans le cadre légal et Constitutionnel ».
vendredi, 04 janvier 2019 09:12
Ambositra: Miaina delestazy indray ny tanàna
Nanomboka omaly atoandro no miaina fahatapahan-jiro ny mponina eto amin’ny renivohitry ny asa tanana. Tapaka amin’ny 12 atoandro dia miverina amin’ny 6ora hariva, dia tapaka indray amin’ny 9 ora alina mandra-maraina amin’ny 8 ora any. Tsy fahampian-tsolika no voalaza hatreto fa antony.
vendredi, 04 janvier 2019 09:10
vendredi, 04 janvier 2019 09:07
Mijoro nanomboka omaly ny Komity miaro ny Fahamarinana.
vendredi, 04 janvier 2019 09:06
Présidentielle 2018: Le résultat officiel sera proclamé le mardi 8 janvier
La Haute Cour Constitutionnelle procédera à la proclamation officielle du second tour le mardi 8 janvier 2019 à 15 heures au Palais d’Etat d’Ambohidahy.